Marketing amin'ny tanjona, fa tsy volomaso | Martech Zone
Alarobia 28 Janoary 2009 Alatsinainy, May 16, 2022 Douglas Karr
Ireo mpivarotra an-tsekoly taloha dia toa mihantona foana amin'ny isan'ny eyeballs. Izaho dia data-data sy mpivarotra mivantana foana, ka tiako ny nahazo ilay marina eyeballs fa tsy manery dokam-barotra manoloana azy rehetra.
Ireo orinasa toy ny pejy mavo dia tia ihany koa ny isa marobe. Novakiako indray mandeha izany 87% n'ny Mponina amerikana no nampiasa ny pejy mavo tamin'ny taona 2007. Tamin'ny famakiana ny printy tsara dia noheverina tamin'ny alalan'ny fanadihadiana an-telefaona izany. Betsaka loatra ny fanontaniana mila apetraka rehefa misy olona manipy isa be aminao toy izany, toy ny:
Tamin'ny firy no nanaovana ny fanadihadiana an-telefaona?
Inona ny demografikan'ireo olona nanontaniana?
Firy ny fanovana natao tamin'ny Yellow Page fampiasana?
Inona ny salanisa amin'ny tamberim-bola ho an'ny mpanao dokambarotra mavo?
Inona no demografika nahatratra an'ireo olona ireo? Mifanaraka amin'ny demografika kendren'ny orinasako ve izany?
Inona ny famaritana ny nampiasa?
Ny tsy firaharahiana ny isa be dia be, izay ataon'ny Pejy Mavo no mandeha amin'izany finiavana. Rehefa manokatra ny pejy mavo ny mpampiasa iray dia manao iraka izy ireo ary mety hitarika amin'ny fifandraisan'ny mpanao dokambarotra izany iraka izany.
Ny milina fikarohana dia manome ny sasany amin'ireo matanjaka indrindra finiavana. Raha mikaroka “mpilalao mp3 tsara indrindra” aho, dia inoana fa handinika aho ary hividy izay tadiaviko. Izany no mahatonga ny maro ireo orinasa dia manao bilaogy - mba hanomezana ny vokatra sy ny serivisiny amin'ny fametrahana milina fikarohana tsara ho an'ny teny fototra momba ny fomba fitadiavan'ny orinasa sy ny mpanjifa azy ireo.
Hafa kely ny Internet Yellow Pages (IYP). Ireo lahatahiry fandraharahana ireo dia samy manana ny fametrahana milina fikarohana SY ny isa lehibe. Ny finoako dia ny IYP dia manalefaka ny fahafahan'ny fitarihana mifandray amin'ny orinasanao satria tsy maintsy:
Mizaha ny lahatahiry
Safidio avy amin'ny lahatahiry ny tranokalanao
Mizotra mankany amin'ny tranokalanao
Rehefa mividy ny fametrahana amin'ny IYP ianao dia avelao ny IYP ho tompona sy vavahady mankany amin'ny orinasanao fa tsy ny tranonkalanao manokana. Ho fanampin'izay, ny mpikaroka dia tsy afaka manao tsotra fotsiny Fikarohana, tany ary ovay - mila mizaha ny lahatahiry izy ireo. Be loatra ny mpanjifa sy orinasa very fanovana amin'ny alàlan'ny fanindriana lavitra 1 be loatra.
mandray finiavana Raha jerena, fa tsy ny isa be dia be, ny orinasa dia mila misalasala momba ny tambajotra sosialy ihany koa. Mahita olona maro aho miresaka momba ny fahombiazana amin'ny fandraharahana amin'ny alàlan'ny Facebook. Tsy misalasala aho fa misy fahafahana hanao varotra any, fa manana ahiahy momba ny mpitsidika aho. finiavana hividy.
Raha fintinina, sorohy ny fisavoritahana ary ataovy lohalaharana ny fampiasam-bola amin'ny Internet izay ny fikasana sy ny fotoana lehibe indrindra no lehibe indrindra:
Atombohy amin'ny fametrahana milina fikarohana lehibe - amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fivarotanao an-tserasera na ny fanaovana bilaogy orinasa.
Manararaotra an'izany amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy hafa.
Miasa amin'ny paikadin'ny upselling sy fitazonana izay ampidirina mailaka Marketing ary Marketing finday.
Janoary 28, 2009 amin'ny 11:59 PM
Tsy nilaza mazava ilay lahatsoratra, fa vonona aho ny hiloka fa ny telefaona HOME ihany no nandrakotra ity fanadihadiana ity. Mazava ho azy fa manilika ny karazana olona tsy manana telefaona an-trano na tsy miraharaha ny fanaovana fanadihadiana toy izany. Heveriko fa manova be ny valin'ny fanadihadiana izany.
Jan 29, 2009 ao amin'ny 12: 36 AM
Miombon-kevitra aminao aho James. Mahafantatra 'fanadihadiana an-telefaona' foana aho satria maro amin'ny demografika an-tserasera no tsy manana telefaona an-trano, tsy mamaly ny findainy, na any am-piasana izy ireo mandritra ny ora vita ny fanadihadiana.
Janoary 29, 2009 amin'ny 12:12 PM
Heveriko fa afaka mamaly ny fanontanianao momba ny fomba ampiasaina amin'ny fanadihadiana an-telefaona Yellow Pages aho.
Ny dinidinika dia atao isan'andro amin'ny taona afa-tsy ny Taom-baovao, Thanksgiving ary Krismasy.
Ny medtôlôlôjia ampiasaina dia dial nomerika kisendrasendra izay midika fa ny laharan-telefaona an-tariby rehetra dia manana fahafahana mitovy amin'ny fisafidianana ny fanadihadiana. Ity fomba fiasa ity dia miteraka santionany izay azo vinavinaina ho an'ny olon-dehibe amerikana manontolo.
86% n'ny olona nilaza fa niresaka momba ny Yellow Pages dia nilaza fa efa nividy na nikasa hanao izany.
Ny salan'isa tamberina amin'ny fampiasam-bola avy amin'ny dokam-barotra aseho eo an-toerana dia $13 amin'ny fidiram-bola isaky ny $1 amin'ny fampiasam-bola.
Noho ny fomba fitantanana ny fanadihadiana, ny mombamomba ny demografika dia nahatratra ny taratry ny mponina olon-dehibe amerikana. Ny mpampiasa Yellow Pages mahazatra dia 25-49 taona, nahazo diplaoma tao amin'ny oniversite, fidiram-bola HH> $60K, haben'ny fianakaviana>4, Nifindra in-3+ tamin'ny taon-dasa, ary nipetraka tao amin'ny toerana misy azy ankehitriny latsaky ny herintaona.
Ny famaritana ny mpampiasa dia olona manokatra lahatahiry ary mijery doka iray na maromaro.
Janoary 29, 2009 amin'ny 12:19 PM
Wow - misaotra amin'ny antsipiriany momba ity Larry ity!
Jan 29, 2009 ao amin'ny 11: 34 AM
Ekeko koa. Hitanay fa mitovy izany eto amin'ny Information Marketing Institute. Ny fahazoana mihazona ny fahafahana amin'ny Internet no fomba handehanana. Heck nahazo ny bilaogiko manokana mihitsy aza aho tao anatin'ilay dingana. Zahao hahitanao azy: http://infomarketingstarter.blogspot.com/